Fitantanam-bola amin’ny covid-19: mitaky ny mangarahara hatrany ireo firaisamonina sivily | NewsMada
Fitantanam-bola amin’ny covid-19: mitaky ny mangarahara hatrany ireo firaisamonina sivily
Par Taratra sur 17/10/2020
Fampiharana ny didim-panjakana lah. 2020-725 nanangana ny Tahirim-bola hoentina miady amin’ny valanaretina covid-19, ahitana ny fampivondronana ireo loharanom-bola sy fandaniam-bola momba ny ady. Anisan’ny takin’ireo firaisamonina sivily amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19, hamafisiny amin’ny fanambarany ireo: “Izahay fiarahamonim-pirenena, vondron’olom-pirenena mpandray andraikitra mitady ny fangaraharana sy ny tamberin’andraikitra”, nampitainy tamin’ny tranonkalam-pifandraisana, omaly. Anisan’ny manao sonia izany, ohatra, ny CCOC, ny MSIS tatao, ny ONG Saha, ny Hetsika Rohy, ny TI-IM…
Hita amin’izany fampiharana didim-panjakana izany koa ny fankatoavan’ny Komity mpandrindra ireo tetibola manokana mifanaraka amin’ny tetibolan’ny “Plan multisectoriel d’urgence” (PMDU), And. 4, ny fandraketana ireo fandaniam-bola ao anatin’ny “Système informatisé de gestion des marchés publics” (SIGMP), ny famoahana tatitra momba ny asa sy ny vola isam-bolana.
Takin’izy ireo koa ny fa­moahana io tatitra isam-bolana io, ahitana ny antsipirian’ny fanatanterahana ara-teknika sy ara-bola ny lisitr’ireo fa­nomezana, ny lisitr’ireo tsenambaro-panjakana no­me­­na, ny tetibidiny, ny lisitr’ireo fitaovana sy kojakoja azo, ny vidin’ny nahazona azy sy ny fanamarinana izany… Eo koa ny fametrahana ny komity mpanara-maso sy mpanao tombana ny vola.